Maxaa keenay in Madaxweynaha Jabuuti uu soo dhaweeyo Isdhaxgalka Geeska Africa? – Bandhiga
Maxaa keenay in Madaxweynaha Jabuuti uu soo dhaweeyo Isdhaxgalka Geeska Africa?
Ismaaciil Cumar Geelle Madexweynaha Jabuuti ayaa ammaanay doorka firfircoon ee Ra’iisul wasaaraha Itoobiya Abiu Ahmed ugu jiro nabadda iyo is dhexgalka wadamada Geeska Afrika.
Madaxweynaha oo ka hadlaayey kulan sadex cisha ahaa oo ay yeesheen Safiiro ree Jabuuti ah iyo Diblomaasiyiin sare oo maamta lagu soo gaba gabeeyey Jabuuti waxa uu soo dhaweeyey is badalka ka jira Bariga Afrika ee uu hormuudka ka yahey Abiy Ahmed sida lagu daabacey Wakaaladda wararka ee Walta.
Madaxweynaha Jabuuti ayaa xusay in ay tallaabadani xal ka geysankarto shaqaaqooyinka ka dhex taagan qeybo ka mid ah qowmiyadaha kudhaqan Geeska Afrika iyo Xalwaara oo laga gaaro xaaladaha hada Jira.
Abiy Ahmed ayuu ugu mahadceliyey dadaalkiisa ku aadan nabada iy isdhexgalka Bariga Afrika ee uu hormuudka ka yahey iyo geedi socodka wada hadalka Jabuuti iyo Eritrea.
Wadamada Soomaaliya,Eritrea iyo Itoobiya ayaa horeyu kala saxiixday heshiis Saddex geesood ah oo ay wadda gaareen, sidoo kale waxaa jira wadamo dhaca Geeska Afrika oo dhankooda soo dhaweeyey is dhexgalkaBariga Afrika.
Jabuuti ayaa la ogyahay in kolkiii hore aaney soo dhaweyn isdhaxgalkan, maadama iyadu ay kamid ah dalalka geeska Africa ee hadane aan ku jirin, waxaana ay ka sii xumaatay markii dowladda Soomaaliya ay qeyb ka noqotay, wallow gadaal la iska fahmay.
Marka la eego hadalka Madaxweynaha Jabuuti waxa uu ka duwan yahay kii uu yiri markii uu ka qeyb galay kulankii Jabuuti ay ku qabteen machadka Heritage waxaana uu markaasi sheegay in taxadar gaar ah loo lahaada arrimaha uu Abyi Ahmed u yahay hormuudka ee Geeska Africa.